Soo-saareyaasha & Shirkadaha Caaga ah - Shiinaha Warshad caag ah
Dabool Sushi Box caaga la tuuri karo
Haddii aad qorsheyneyso inaad beddesho sanduuqa sushi ee caagga ah ee la tuuri karo, ama aad rabto alaabooyinka saxda ah ee qiimaha dhaqaale, ka iibso qalabka korantada khadka tooska ah kooxda Chunkai's Team. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loogu baahan yahay macaamiisha sababtoo ah astaamahooda sida dhismaha adag, ka hortagga ceeryaanta, caabburka miridhku iyo nolol dheer. Iyada oo gacan ka heleysa xirfadlayaashayada, waxaan ku siineynaa alaabooyinkan cabirro kala duwan sida waafaqsan shuruudaha kala duwan ee macaamiisheenna qiimaha leh. Intaa waxaa dheer, shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarida sanduuqa sushi ee xirfadlaha ah, sanduuqa sushi ee caagga ah ee la tuuro.
Buufiye Caag Wanaagsan oo Buufinaya Buufis leh Xad-dhaaf
Hablaha wanaagsan waxay si tartiib ah ugu buufiyaan walxaha aag aad u ballaaran. Si ka duwan sida lagu shubo badeecada, marka la isticmaalayo koofiyadaha mister-ka, maaddadu ma qoyso ama ma dheregto aagagga, laakiin taa bedelkeeda, waxay marsadaan lakab khafiif ah oo ka mid ah alaabada, taas oo lagu daro maadooyinka sida buufinta timaha iyo urta. Qaddarka la codsaday ayaa sidoo kale lagu hagaajin karaa iyadoo lagu buufinayo wax badan. Marka ay timaaddo adeegsiga hawo-qaboojiyeyaasha, daruur ceeryaamo wanaagsan ayaa u faafta si sahlan maadaama ay hawada ku sii jirto muddo dheer, walxahana ay fudud yihiin. Inkasta oo qaar ka mid ah waxyaabaha wax lagu nadiifiyo ay ku habboonaan karaan in lagu isticmaalo buufinta kicisa, taas oo wax soo saarka ku bixisa dusha sare ee dillaaca dhumuc weyn, daaqadaha daaqadaha iyo alaabada nadiifinta alwaaxda badanaa way ka sii fiicnaadaan marka laga buufiyo macmacaannada ka fiican.
Mashiinka la tuuro Mindiyada fargeetada miis Weelasha
Weelasha la tuuro ee Mindi fargeetada Weelasha Weelasha ayaa nolosha u fududeynaya meheradaha, kuwaas oo halkii ay ka ahaan lahaayeen maydhaan farabadan oo ah mudacado bir ah, malqacado, iyo mindiyo, waxay si fudud u weydiisan karaan kuwa wax jaraya inay iska tuuraan dharkooda markay cunaan. Waxay sidoo kale nolosha u sahlaysaa macaamiisha martigelinaya munaasabadaha ama xafladaha leh tiro badan oo marti ah.
Boorsooyinka lagu keydiyo Vacuum ilaa keydka Hawada
Boorsooyinka lagu nadiifiyo ama bacaha wax lagu rido ayaa caan noqday dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyadoo dad aad u badan ay bilaabeen inay isku maroojiyaan dharka iyo dharka si ay u badbaadiyaan booska.
Wuxuu la shaqeeyaa nadiifiye kasta oo faakiyuum ah, uun buuxi. Keydinta booska kaydinta, 80% boos ayaa yaraaday
Sibidhka laba-laablaha ah wuxuu hayaa hawo-qabe iyo biyo-la'aan, oo ah agab waxtar leh oo ku lifaaqan boorso kasta
Caaryo iyo caariyaysi malahan, ilaali dharkaaga, gogosha gogosha, barkimooyinka, bustayaasha
350ml Fat U-qaab Caag Casiirka Casiirka Caaga
Dhalada nooca Cagaaran ee caaga ah oo ah 350ml Fat-U ah waa mid aad u qurux badan, kuna habboon casiirka, cabitaanka iyo biyaha.Waxaa loo isticmaalay maadada PET ee darajada cuntada, bilaash BPA, oo la jaan qaadaya xatooyada cadeynta.Waxaan u habeyn karnaa midabka dhalada, sidoo kale calaamadee ama daabac astaanta dhalada.
Bacaha Dharka Dahaarka ah ee caaga ah
Dambiishahan 'Transparent Plastic PE Zipper Dharka Dharka' waxay ka samaysan yihiin waxyaabo cusub oo PE ah, adkeysi adag, muuqaal siman, fudud oo la qoro, qurux badan oo deeqsi ah, waa la calaamadin karaa oo la daabici karaa. cidhiidhi shahaado
Dhalo Shaah Caan ah oo PUB ah
Dhaladaan Chubby Clear Milk Shaaha PET waa mid aad u qurux badan, oo ku haboon shaaha caanaha, cabitaanka iyo biyaha.Waxaa loo isticmaalay maadada Cuntada ee PET, bilaash BPA, oo la jaan qaadaya xatooyada cadeynta.Waxaan u habeyn karnaa midabka dhalada, sidoo kale ku calaamadee ama calaamadda daabacan dhalada.
Dhalo Muusig ah oo qaabeysan oo Shaashad loogu talagalay Qaadista
Dhaladaan Hal-abuurka ah ee qaabeysan ee loo yaqaan 'Take Conay' waa mid aad u qurux badan, oo ku habboon biyaha macdanta, cabitaanka iyo biyaha.Waxaa loo isticmaalay maadada cuntada ee PET, bilaash BPA, oo la jaan qaadaya xatooyada caddaynta.Waxaan u habeyn karnaa midabka dhalada, sidoo kale calaamadee ama daabacaadda daabacan dhalada.
Bacda Qashinka Jebinta Tooska ah ee Dot-break
Bacda Qashinka ah ee Dot-break Xiritaanka otomaatigga ah waxay ka samaysan tahay qalab cusub oo HDPE ah, ad-adayg xoog leh, muuqaal siman, si sahlan loo qoro, qurux badan oo ku habboon in la isticmaalo.
Laba Weel Weelka Cuntada Caaga ah
Weelkan Laba Weel Caag Cuntada Caag ah waa mid caan ah oo iibinta kulul,
Waxay leedahay faa'iidooyinka hoose:
Hayso Cunno Cusub: Sanduuqa Qadada Diyaarinta Cuntada Weyn si aad cuntadaada uga dhigto mid cusub oo macaan cuntada fudud.
Nabdoonaanta: Weelka iyo daboolka waxaa sameeya BP-Bilaash ah iyo Cunto-Fasal Maaliyadeed oo PP ah.
Dib loo isticmaali karo oo waari karo: Weelka waxaa loogu talagalay in lagu keydiyo qaboojiyaha ama kiishka qadada, iyadoo leh caddeyn soo baxaysa iyo dabool adag oo hawo leh.
Microwave / Talaajo / Mashiinka weelka aaminka ah ee Rack Top: Adkeysta heerkulka -40 ° F ilaa 320 ° F (Ama -40 ° C ilaa 160 ° C)
Dambiisha Vacuum Sealer ee Kaydinta Cuntada
Boorsooyinkaan Vacuum Sealer ee loogu talagalay Cuntada Keydiyaha waa mid caan ah oo iibin kulul.
Nabdoonaanta: BPA Bilaash, Isku kari kari iyo Microwave Ammaan, Ku Wanaagsan Cunitaanka Sous Vide
Mid Ka Mid Ah Dhammaan: Loogu talagalay in loogu isticmaalo dhammaan mashiinnada baakadaha faakiyuumka
Waajibaadka Culus: Waxyaabaha ganacsiga badan leh ee fasalka ganacsiga ka celiya oksijiinka iyo qoyaanka oo baabi'iya qaboojiyaha gubashada iyo fuuqbaxa
Dhaqaale: 2 xirmo 11 `` ballac, dherer 50 fuudh ah. taas oo wadarta 100 fuudh ah. Sameynta dhererkaaga boorsadaada ah.
Weelka La Tuuri Karo Caaga Kaydinta Cuntada Weelka
Weelka Cuntada lagu Rido ee Qaadka ah ee Caagaga Cunnada ah waa mid caan ah oo iibinta kulul.In kasta oo cunnada dhaqan ahaan loo maleeyo inay ku jiraan xirmooyinka khariidadaha, xaqiiqda ayaa ah in badeecooyinka macaamiisha badankood ay ka faa'iideysan karaan baakadaha balastarka. Xulasho aad u fiican markaad rabto macaamiisha inay ku arkaan sheygaaga keydka dukaamada, xirmooyinka khariidadaha si fudud ayaa loogu qaabeyn karaa qaabab kala duwan iyo xulashooyinka naqshadeynta si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee alaabtaada. Baakadaha maqaarku sidoo kale waxay qabataa shaqo aad u weyn oo ku ilaalinaysa alaabadaada mid nabdoon iyadoo u sahlaysa helitaanka macaamiisha. Tixgeli faa iidooyinka soo socda ee baakada finanka.